लक्ष्मी जो सामान्य उपचार गराउन हस्पिटल पुगिन तर फर्किनन् घर ! आफन्त बाहिर कुरिरहे तर देख्न पाएनन ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार १३:१७
रोग पहिचान नगरी शल्यक्रिया गर्दा गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका–८ की १७ वर्षीया लक्ष्मी रसालीको निधन भएको छ । पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा ‘एपेन्डिक्स’को उपचारका क्रममा शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको रक्त नशा फुटेर रगत बगेकोे अस्पतालको दाबी छ । लुम्बिनीमा थप उपचार हुन नसक्ने भएपछि चिकित्सकसहितको टोलीसँग भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि बिरामीलाई लगिएको थियो ।
शनिबार सामान्य बिरामी भएपछि पाल्पामा उपचारका लागि ल्याएको र आइतबार बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा गदै निधन भएको मृ तककी आमा रेश्मी रसालीले जानकारी गराउनुभयो । शल्यक्रिया गर्दा लापरवाहीमा छोरीको निधन हुन गएको आमा रेश्मी रसालीको दाबी छ ।
एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गर्दा पेटभित्र नशा फुटेर रगत जमेको थियो । जमेको रगत हटाइयो । नशा फुटेर बगेको रगत रोक्नका लागि नशाको शल्यक्रिया गर्न भैरहवा मेडिकल कलेजमा चिकित्सकसहित पठाइएको कलेजका वरिष्ठ सर्जर डा राजकुमार क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
कलेजका प्रवक्ता कृष्ण पराजुलीले शल्यक्रियापछि थप उपचार आवश्यक रहेकोले भैरहवा लैजाँदा निधन भएको बताउनुभयो । पीडित र अस्पतालबीच पटक–पटक सहमतिका लागि वार्ता भएको छ । मृ तकको श व भैरहवास्थित कलेजमा रहेको छ ।